WINE 6.0-rc6 inosvika neinenge zvigadziriso zvazvino | Linux Vakapindwa muropa
Sezvo zuva rinoswedera, zvese zviri kutora uye kugadzirisa chimiro chazvo. Kwemavhiki mashanu ikozvino, WineHQ yanga ichiburitsa Vanoburitsa Vanokwikwidza yeinotevera huru yekuvandudza yeiyo Windows app yekuteedzera software pane mamwe mapuratifomu. TO yechishanu, nezuro zvakaitika WAINI 6.0-rc6 Uye, senge shanu dzakapfuura, hatigone kutaura kuti inosanganisira nhau dzinonakidza kwazvo.
Uye, sezvo chikamu chebudiriro ichi chasvika, zvichisiya vhezheni yacho yaburitswa vhiki mbiri dzese, WineHQ inotangisa vhezheni imwe chete pasvondo, asi kungo gadzirisa maduku madiki. Izvi zvinodaro nekuti ivo vasvika pabasa rekugwamba, uye ivo vanodaro mu kusunungura chinyorwa: «Bug kugadzirisa chete, isu tiri mune kodhi yechando«. Kunyangwe zvakadaro, ivo vanotipa isu nerondedzero yeshanduko dzese dzakaunzwa, shoma kwazvo, asi zviri nyore kuverenga.
WINE 6.0-rc6 inosvitsa zvigadziriso gumi uye makumi maviri neshanu shanduko
Kana danho rekuvandudza iri biweekly, WineHQ inosvitsa mazana ekuchinja, dzimwe nguva padhuze kana kupfuura mazana mana, asi ikozvino haina kana kure kure neizvozvo. Yese, vakaita gadziriso gumi uye makumi maviri neshanu shanduko, iyo iri kagumi kushoma pane dzimwe nguva, asi nekuda kwekutonhora kwekodhi nemabasa.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.0-rc6 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati eSte y uyu mumwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa mune ramangwana pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune zvekare mavhezheni e Android uye macOS.
Kana pasina chinoitika, inotevera vhezheni ichave WINE 6.0-rc7 uye ichasvika Ndira 15 yegore ratichangoburitsa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » WINE 6.0-rc6 inosvika neinenge zvigadziriso zvazvino